Imisebenzi ebandayo neshisayo: babikezelani ngokuhlukile komunye nomunye? | Ukuqeqeshwa kwengqondo
Manje sekuyaziwa futhi kuyaziwa ukuthi imisebenzi yokuphatha ihlobene kakhulu (kanye nobuhlakani) ezicini eziningi zempilo yethu: sinedatha maqondana nokubikezela kwabo maqondana ukusebenza kwezemfundo, ku- creativeness, amakhono okufunda kanye ukuqonda kombhalo, at amakhono wezibalo, kuya ulimi futhi konkeubudlova.
Imvamisa, kepha, ekuhlaziyweni komphumela wemisebenzi yokuphatha ezicini ezibalulekile zempilo yethu, ucwaningo lugxila kakhulu kulokho okuthiwa imisebenzi ebandayo yabaphathi, okungukuthi, "ukuqonda" okuningi futhi kukhululekile emizweni (isibonelo, i- inkumbulo yokusebenza, ukuguquguquka kwengqondo nokuvimbela); kuncane kakhulu okukhulunywa esikhundleni semisebenzi okuthiwa yiphathi esishisayo, okungukuthi, leyo ethinta izinhloso eziqondisa izinqumo zethu (ikakhulukazi uma zigcwele izici ezingokomzwelo nezishukumisayo), ukulawula imizwa, ukufuna ukwaneliseka kanye nokukwazi ukukuhlehlisa .
Ngo-2018, uPoon ngakho-ke uthathe isinqumo sokuhlola iqembu lentsha maqondana nokufunda esikoleni futhi maqondana nenhlalakahle yabo ngokwengqondo kanye namandla okuzivumelanisa nezimo; ngasikhathi sinye, zona lezi zinsizwa zifakwa ekuhlolweni kwemisebenzi yokuphatha, kokubili okubandayo nokushisayo, ngebhethri elikhethekile elejwayelekile.
Ngaphandle kwalokho okushiwo ngumbhali ku-athikili yakhe, konke ukuhlolwa kusetshenziselwa ukuhlola ukubanda (ukulawula ukunakwa, ukuvimbela inkumbulo yokusebenza, ukuguquguquka kwengqondo nokuhlela) futhi kuyashisa (ukwenza isinqumbo) zazingahambisani kahle noma zazingahlobene nhlobo (ukuhlangana okuphezulu kakhulu, futhi okukodwa kuphela ukufinyelela ezingeni lokubaluleka kwezibalo, r = 0,18!); lokhu kusivumela ukuba siqagele, ngokuhambisana nalokho abaphikisana ngakho noMiyake, ukuthi izingxenye ezahlukahlukene zemisebenzi yokuphatha azihlukaniseki ngokuqhathaniswa.
Impela into ethakazelisa kakhulu ukuthi, inetha lethonya leleveli yengqondo, imisebenzi ebandayo yokuphatha babikezela isibalo se- ukusebenza kwezemfundo ngenkathi imisebenzi emihle yokulawula kufakazelwe ukuqagelalithathelwe ngokwengqondo.
Imisebenzi yokuphatha ebandayo neyashisayo, ngenkathi isebenza ngokubambisana, bese kubonakala sengathi iyizakhi ezimbili ezihlukile futhi ezinokubaluleka okwehlukile maqondana nezimo zokuphila ezahlukahlukene.
Ekugcineni, enye idatha ephawulekayo ikhathaza ukuthambekela kwezikolo ezivivinyweni ezisetshenziswe kulolu cwaningo, kusukela eminyakeni engu-12 kuya kwengu-17 ubudala: inkumbulo yokusebenza ngamazwi kukhombisa ukukhula okuqhubekayo nobudala (ebangeni elibhekwe kulolu cwaningo), futhi kukhombisa ukwanda okusheshayo cishe kweminyaka eyi-15; futhi ukulawula kokunaka ivela ekukhuleni okuqhubekayo kuleli qembu leminyaka; Lapho ukuguquguquka kwengqondo kubonakala kukhula ngokuqhubekayo kuze kube yiminyaka eyi-16 ubudala; ngokufanayo, amandla okwenza okusithiyayo ikhombisa ukukhuphuka okukhulu kusuka ku-13 kuye ku-16; Lapho ukuhlelaekugcineni, kukhombisa ukukhula okuqhubekayo nobudala, kukhombisa nokho inani eliphakeme lokukhuphuka elizungeze iminyaka eyi-17.
Kwehluke kakhulu ukuthambekela kwe- imisebenzi emihle yokulawula kusukela ukuthambekela okuvela eminyakeni eyi-12 kuya kwengu-17 ubudala kumise okwensimbi (noma kuguqulwe "U"); ngamanye amagama, cishe iminyaka eyi-14-15 ubudala, ukubonwa okubi kakhulu kuyabonwa (kulolu cwaningo) kuqhathaniswa neminyaka edlule neyalandela; ngokunembile, kuleli qembu lobudala kukhona ukuthambekela okukhulu kokubeka engozini kanye nokufuna ukwaneliseka okuncane kepha ngokushesha (uma kuqhathaniswa nalezo ezikude kakhulu ngesikhathi kodwa ezinkulu).
Mayelana nemisebenzi ebandayo yokuphatha, ukuvimbela, inkumbulo yokusebenza kanye nokuguquguquka kwengqondo kubonakala njengokuvuthwa ngaphambi kokuhlela; ngakho-ke kungacatshangwa ukuthi okwangaphambili (okuyisisekelo ngokwengeziwe) kuyisisekelo sokuthuthuka kwesokugcina (sezinga eliphakeme).
Uma kuqhathaniswa nemisebenzi yokuphatha eshisayo, iphethini "U" ephendukile ebekiwe ingachaza ukwanda kokuziphatha okuyingozi okujwayele ukubonwa ebusheni.
Ngokuvamile, izivivinyo zemisebenzi ebandayo yokuphatha kanye naleyo yemisebenzi eshisayo yokuphatha kubonakala sengathi zilinganisa ukwakhiwa okwehlukile: okwedlule, empeleni, kubonakala sengathi kuhlobene kakhulu nokufezekiswa kwezinhloso eziningi "zokuqonda" (ngokwesibonelo, ukusebenza kwesikole), lezi zokugcina zihlobene kakhulu nezinhloso eziningi zenhlalo nezomzwelo.
Umbono ohlanganiswe ngokwengeziwe wemisebenzi yokuphatha uyasiza, imvamisa awulinganiseli kuphela ezintweni eziningi abandayo.
Imisebenzi yokulawula “yoHlelo”: umphumela we ukufaka amakhodi ekuhleleni nasekuvimbeleni izingane zasenkulisa
Imisebenzi ephezulu ebikezela ukusebenza kwesikole
Ubudlelwano phakathi kwemisebenzi yokuphatha nolimi lwasenkulisa
Ukuguquguquka kwengqondo namakhono wezibalo
UPoon, K. (2018). Imisebenzi yokuphatha eshisayo nepholile ebusheni: ukuthuthuka nokunikela emiphumeleni ebalulekile yokuthuthuka. Imingcele kwezengqondo, 8, 2311.
imisebenzi ephezulu, imisebenzi emihle yokulawula, imisebenzi yokuphatha nokuzivumelanisa nezimo ngokwengqondo, imisebenzi yokuphatha nokusebenza kwezemfundo, imisebenzi ebandayo yabaphathi, amakhaza futhi hot imisebenzi executive
Imisebenzi ebandayo neshisayo: babikezelani ngokuhlukile komunye nomunye?2021-08-232021-08-23http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngUkuqeqeshwa kwengqondohttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2021/08/funzioni-esecutive-fredde-e-calde.-cosa-predicono-di-diverso-tra-loro.jpg200px200px
Ubudlelwano phakathi kobuhlakani obuketshezi nemisebenzi ephezuluIzindatshana, Imisebenzi Yesigungu Esiphezulu, Imisebenzi Yezokuphatha, Ubuhlakani